Fitbit ka bụ eze ahịa a na-ere ere | Akụkọ akụrụngwa
Fitbit ka bu eze ahia ahia
Ọnwa atọ gara aga, anyị gosiri gị nọmba ọnụahịa maka ndị na-eji ejiji, ahịa nke ụfọdụ ndị nrụpụta na-amalite ịhapụ, dịka Motorola, nke ụbọchị ole na ole gara aga kwupụtara na ọ na-ahapụ ngalaba a, opekata mpe ruo mgbe ahịa ahụ gosipụtara ihe ngosi nke mmasị, adịghị amasị ruo ugbu a ọ dị ka ọ bụ na ngwaọrụ ndị a bu n’obi otu ndi mmadu bi na ya. Ọ bụghị naanị Motorola na-ahapụ ụgbọ mmiri, dị ka Pebble na-eme ozugbo Fitbit zụtara ya. O doro anya na n'ahịa ahụ a na-ebelata nhọrọ ndị ọzọ.
IDC bụ ụlọ ọrụ nyocha nke na-enye anyị data nkeji ọ bụla banyere ire ahịa, ma ọ bụ mbupu ngwaọrụ zuru ụwa ọnụ site n'aka ndị nrụpụta kachasị, mbupu nke na-agbanyekarị ahịa. Na ikpeazụ a akụkọ anyị pụrụ ịhụ otú mbinye aka Fitbit ka bu eze ahia ahu na mbupu nke nde 5,3 yana òkè ahịa nke 23%, nke na-anọchite anya mmụba nke 11% ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Fitdị Fitbit kacha ere ahịa bụ Blaze, Alta, Flex 2, na Charge 2.
Na ọkwa nke abụọ anyị na-ahụ Xiaomi China, nke nwere nde nkeji 3,8 zigara nkeji iri na ise a nwetara oke ahịa nke 16,5%, yana mmụba nke 4%. Na ọnọdụ nke atọ anyị hụrụ Garmin, nke jisiri ike nweta n'etiti ndị buru ibu na-ebupụ nkeji 1.3 na ahịa ahịa nke 5,7%, yana mmụba nke 12.2% tụnyere otu oge nke afọ gara aga.
N'ọnọdụ nke anọ, anyị nwere Apple ya na Apple Watch, ihe nlele nke hụgoro ọhụụ na ọnụ ọgụgụ nke mbupu, na-aga site na nde 3,9 n'afọ gara aga ruo ihe karịrị nde 1.1, nke na-anọchite anya mbelata nke 71%. Ngwa ngwa, Tim Cook, isi nke Apple abịawo na-ekwuwapụta na ọnụ ọgụgụ ndị a bụ ụgha ma ha adabaghị n'eziokwu.
Ọ dị egwu na rue ugbu a Apple egosighi onwe ya banyere eziokwu nke data IDC, data dị mma mgbe niile, mana mgbe ọnụọgụgụ malitere ịda, ha gosipụtara ngwa ngwa na ha abụghị eziokwu. Ọ dị obere, karịsịa na-atụle nke ahụ Apple emetụbeghị akụkọ Apple Watch kamgbe igba egbe ya.
Na nke ise anyị na-achọta ndị Korea nke Samsung, nke na-aga site na ihe karịrị ọkara nde nkeji rere otu nde, yana mmụba nke 89,9% na oke ahịa nke 4,5%, nke yiri nnọọ na 4,9% nke onye iro ya kachasị elu n'ụwa nke telephony na ugbu a. mpaghara nke wearables, Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Fitbit ka bu eze ahia ahia
Otu ìgwè nke ndị na-egwu ohi na-ezu ohi ihe karịrị nde 85 Dailymotion
HTC One M9 amalite ịnata gam akporo 7.0